ओली सरकारले ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कोष सही भएपनि कार्यान्वयनमा आशंका छः काँग्रेस | suryakhabar.com
Home राजनीति ओली सरकारले ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कोष सही भएपनि कार्यान्वयनमा आशंका छः काँग्रेस
काठमाण्डौ । नेपाली काँग्रेसले ओली सरकारको सामाजिक सुरक्षा योजनाको स्वागत गरेको छ । काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तीका अनुसार काँग्रेसले यसको कार्यान्वयन पक्षमा भने आसंका गरेको छ । काँग्रेसले सामाजिक सुरक्षा लगायतमा सरकारको यसरी बिरोध गरेको छ ।
विशवप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, नेपाली कांग्रेसद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा म यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु । महासमितिको बैठक तयारी क्रम चलिरहेको यहाँहरुलाई विदितै छ । पार्टी विधानको संशोधित मस्यौदा प्रस्तावमाथि केन्द्रीय कार्यसमितिको जारी बैठकमा छलफल चलिरहेको छ । यसबारेमा आवश्यक सूचना म उपलब्ध गराउनेनै छु । आजको पत्रकार सम्मेलन भने मूलतः फरक दुई विषयमा केन्द्रीत छ ।
जारी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट मंसिर १६ गते पारित यस सम्बन्धी प्रस्तावः
३. नयाँ युगकै संज्ञा दिनु पर्ने हो भने संसदमा पेश भएको दिन अथवा पारित भएको दिन अथवा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको दिन अथवा गत मंसिर ११ मा तामझाम गरिएको दिन, अझ यो कार्यान्वयनमा आउन तय गरिएको ०७६ को साउन १ को दिन …. । एउटै सन्दर्भमा कतिवटा दिनलाई नयाँ युगको संज्ञा दिने ? त्यसैले नयाँ युगको संज्ञा केवल सरकारको बढ्दो अलोकप्रियतालाई ढाक्न खोज्ने पातलो पछ्यौरी मात्रै हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको आजको बैठकबाट पारित अर्को प्रस्ताव